Inqanaba: Ukugcinwa kwedatha kwiBhokisi! | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 20, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Oku kunokuba yinto encinci ye-geeky, techy, iposti kodwa kuye kwafuneka ndibelane nawe. Enye yeenjongo Martech Zone ibonelela abantu ngolwazi malunga netekhnoloji kunye nentengiso- ke uya kubona ezinye izithuba ezipholileyo kubuchwephesha kumxube amaxesha ngamaxesha.
Ukuba esi sithuba siqala ukufunda njengeKlingon, yigqithise kwi-CIO yakho. Ndiqinisekile uyakuchukumiseka!
Ngale njikalanga ndikonwabele ukuya kwisemina kunye Isikali seKhompyuter, isingathwe nguDoug Theis kunye Amaziko eDatha oLwazi. Ndifuna ukufunda okungakumbi malunga ne-Scale Computing emva kokuba ndizifundile iindaba kunyaka ophelileyo zokuba bafumene i-2 yezigidi zeedola kwi-21st Century Fund.
Kwakukho ukukrokra kolu shishino xa iSikali saphumelela… ukusukela oko zininzi kakhulu izinto zokuqala ezenziweyo ezilahliweyo kwaye ezinye zezinto zokunuka zokwenyani ziye zadlula kwi-21 gauntlet fund. Isikali sasingenabuchwephesha in I-Indiana… bafudukela apha. Ezi ziindaba ezimnandi- kwaye ngokungathandabuzekiyo Isikali siya kuxhamla kwirhafu ephantsi, icandelo le-tech eqinileyo kunye nomvuzo ofikelelekayo apha eIndiana.
Oko kwathethi, yimveliso enomdla ngokumangalisayo eyenziwe yiSikali. Kwiminyaka engama-20 eyadlulayo, ndandilawula inethiwekhi ye-OS2 eneeseva ezingafunekiyo kunye noluhlu lweediski zeRAID. Ukuqinisekisa ukuba inkqubo yayihlala inyukile, yayiyibutho lemihla ngemihla lokujonga kunye nokujikeleza kweedrive, ukwakha kwakhona iidrive, kunye nezixhobo 'zokuma ezishushu' ezikulungeleyo. Yayiyiphupha elibi- kwaye yayigcwele ngamanqaku angatshatanga okusilela awayehlala engumba.
Ugcino oluHlanganisiweyo oluDibeneyo (ICS) ngeCale Computing intle kakhulu.
Njengokuba uBryan Avdyli weSikali esitsho, "Ukugcina bekungekho 'ukuthandana' ixesha elide!". Isikali seKhompyuter siphuhlise izixhobo zekhompyuter ezithatha indawo yamacandelo aliqela kwiziko ledatha eliphakathi. Ngokwesiqhelo namhlanje, ukuhlanganiswa okulawulwayo kusetyenziswa iindawo ezilawulayo ngokudibana okusebenzayo. Oku kwazisa inqaku elinye lokusilela kwaye akuvumeli ukwenziwa kwenyani kokusebenza okanye ukufikelela kwindalo iphela. Emva kweminyaka elishumi, uninzi lwenkqubo lusasebenzisa ubudlelwane bobukhoboka obuphambili kwaye banelungelo. Oku kuqhubele phambili amaxabiso olondolozo olulawulwayo… kwaye inkampani eyi-avareji eyifunayo ayinakho ukufumana isisombululo esikhulu sokugcina.
Isikali sithathe itekhnoloji ye-IBM entsonkothileyo sayinciphisa sayisa kwiyunithi enye. Isikali sisisombululo esisebenzisanayo sokuhlanganisa apho indawo nganye ifikelelekayo, kwaye nganye isebenza njengeyunithi enye. Ukuba inode enye okanye ukuqhuba kuyasilela, umqalisi ujolise ngokuzenzekelayo kwenye indawo. Ukwahlulahlula kulula kwaye phantse akunamda. Isisombululo sokugcina esinexabiso eliphantsi esinokuba yi-SAN / NAS, isifinyezo, ukubonelelwa okuncinci, njl. Inkqubo inokulinganisa ukuya kwi-2,200TB (nangaphaya) kwaye inokumiliselwa ekugcinweni kwedatha yasekhaya okanye ekude. I-iSCSI kunye ne-VMWare iSCSI Multipathing nayo yakhiwe ngaphakathi ngenkxaso ye-iSCSI, CIFS, kunye neeprotokholi zeNFS.
NgesiNgesi, oku kuthetha ukuba inkampani yakho ingathenga isisombululo se-3TB phantsi kwe- $ 12k kwaye ngokuyisiseko uyixhome. Iinkonzo zakho zangoku zingagcinwa ziqhutywa kwaye idatha ifuduswa- nokuba usandisa amandla akho, unciphisa ixesha lolawulo ngama-75%. Njengoko usandisa inkqubo nawe awudingi ukongeza iilayisensi ezongezelelweyo.
Itekhnoloji eyoyikekayo enokutshintsha iindleko kunye nokusilela kwishishini lokugcina idatha. Kuza kufuneka ndivume ukuba i-2 yezigidi zeedola ezivela kwingxowa-mali engama-21 inokuba sisigqibo esihle kule nkampani. Eyona nto ndiyixhalabeleyo kukuba kungekudala baya kuthengwa yinkampani enkulu… ngethemba emva kokuba befudukele apha kwaye benze ifuthe lezoqoqosho!
tags: Ukunyaniseka kwegamaukuthengisa ngokuthe ngqoingqalelo yomfundiimithombo yeendaba zentlaloukumodareyitha kwimidiya yoluntuUkucwangciswa kweendaba ezentlaloindibaniselwano yemidiya yoluntu
Oktobha 21, 2009 ngo-3: 50 PM
Hee uDouglas, ndiyathemba ukuba uzakundidibanisa nomculo, iziselo, i-wi-fi + nerd-speak
kwiiBlogger ezingaziwayo ngale Lwesine, Okthobha 22, 5-7PM kwiMyuziyam yase-Indianapolis yoBugcisa
RSVP kwaye ufumane ulwazi ngakumbi apha: http://www.facebook.com/event.php?eid=15997455071...